December 2015 – Ministry of Education in Puntland
December 28, 2015 / News
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada puntland oo Deeq Waxbarasho Ka heshay Markii ugu Horaysay Dalka sucuudi Arabia.
28/12/2015- Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa sagootisay 8 arday oo deeqo waxbarasho sanadkaan looga helay dalalka Suucuudi Arbia. Ardaydaan oo ah kuwa dugsiyada sare kabaxay , […]
December 27, 2015 / News
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliint sare ee dowladda Puntland oo furtay tababar ku saabsan xog-ururinta waxbarashada Dadban.( Sawiro)
26/12/2015 Wasiirka ku xigeenka wasaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda Puntland Dr. Maxamed Cali faarax ayaa tababar ugu soo xiray magaalada Garowe 124 kamid ah maamulayasha waxbarashada dadban. Tababarkaan […]
December 16, 2015 / News
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ka biloowday kormeerkii waxbarashada Gobolka Bari.
16/Dec/2015- Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa bilowday inay kormeero dhameystiran ku sameyso dhammaan dugsiyada, xarumaha iyo macaahida ay waxbarashu ka socoto. Kormeerkaan ayaa wajigiisa kowaad ka […]
December 14, 2015 / News
Wasaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo 10-Haween ah Jaamacad Suudaan ah u dirtay
13/Dec/2015- Wasaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Dowladda Puntland ayaa xarunteeda magalada Garowe kulan sagootin ah ugu samaysay 10-haween ardey ah oo Jaamacad looga helay wadanka Suudaan. Sagootintan waxaa kasoo qayb […]
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ugu baaqay bahda Waxbarashada Gobolka mudug inay dib ugu u furaan Goobihii Waxbarashadda.
Wasaaradda Waxbarashadda iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo dhagax dhigtay Dhismo lagu kordhinaayo Dugsiga Xamdaan Boosaaso.
Wasiirka iyo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ka qaybgalay qalanjibintii Jamacada boosaso.
Wasaaradda Waxbarashada oo kormeer ku Tagtay dugsiyada sare public boosaso iyo Imaamu Nawaawi boosaso.